Ego ole ka njegharị Tour de France na-efu 2020? - Tour De France
Isi > Tour De France > Tour de france ọdịda - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Tour de france ọdịda - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ọ gaỌnụIhe ruru $ 12,000. IheTour de Franceabụghị naanị nnukwuịgba ígwèagbụrụ nke afọ bụkwa ọkwa kasịnụ maka ndị nkwado na ndị nrụpụta iji kpughee igwe nrọ nrọ carbon kachasị ọhụrụ ha.6. 2018
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Tour de France bụ ihe omume ịgba ịnyịnya ígwè kasị ukwuu nke oge ahụ, nke a na-eme na July. Na njem ahụ, ndị na-agba ịnyịnya kachasị mma n'ụwa na-asọ mpi iri abụọ na otu gafee France maka ọnụahịa kachasị na ịgba ịnyịnya ígwè, izu atọ nke ịgba ọsọ dị iche iche kwa ụbọchị na ọtụtụ agba agba dị iche iche siri ike idobe, yabụ anyị ga-agbaji ya. na ntuziaka onye mbido a na Tour de Frost Gịnị bụ njem ahụ? The Tour de France bụ otu n'ime atọ nnukwu igwe kwụ otu ebe njegharị na ọ bụ? ndị kasị ibu prestigious agbụrụ na kalenda enweghị ajụjụ dị ka a na-enye onyinye na tour de France mejupụtara 21 onye nkebi nke gbasara izu atọ ugbu a ọ bụla ogbo na-oge, onye ndú nke onye mmeri na onye mmeri zuru oke kpebisiri ike na ngụkọta oge ntụgharị bụ ugbu a na mgbakwunye na n'ozuzu ogo kwuru na dị ka izugbe nhazi ọkwa ma ọ bụ gcas ọ na-ezo dị ka ịbụ ndị mbụ ga-agbaru agbaru ọ bụla ogbo ịbụ okpueze ogbo, ndị njem na-agụnyekarị izu ike abụọ na-enweghị ọduọ, ọ bụ ezie na ndị na-agba na-apụ ma mee apata ụkwụ iji mee ka ụkwụ ha na-agagharị, mana ha na-ewepụ ụbọchị ndị a iji hụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịgbake ka ha nwee ike ịgba ọsọ dị ka o kwere mee ụbọchị ndị na-abịanụ iji mee ka agbụrụ ahụ bụrụ nke na-atọ ụtọ dịka o kwere mee. Njegharị ahụ na-agba kemgbe 1903 na naanị nkwụsịtụ site na Agha Iwa Mbụ na II, na-eme ka agbụrụ 2020 107 malite na mba agbata obi dị ka Belgium, Netherlands, Great Britain na ebe ndị ọzọ, ugbu a, usoro izizi nke agbụrụ ahụ na-ewerekarị na mba ahụ, mana ha na-aga France maka mmalite a maara dị ka Grand Departall ya mere njem nke Tour de France dabara n'otu ụzọ ise ọkwa dị iche iche nke mbụ ọkwa ndị a dịkarịsịrị nwere obere mmasị ma jiri ya gbaa ọsọ ahụ n'etiti ịkwaga ugwu ndị gafere mpaghara French, ugbu a ndị ọkachamara anyị na-akpọ ndị na-agba ọsọ na-emeri ha, ndị na-agba ọsọ ọsọ karịrị kilomita 70 kwa elekere, mgbe ha na-agba ọsọ gaa na njedebe na ebe dị oke ọsọ, mgbe ahụ anyị nwere ugwu ugwu nkebi, ugbu a ugwu nke njem ahụ bụ ihe omume bụ isi na akụkụ nke agbụrụ ahụ, nke onye ọ bụla chọrọ ịbụ akụkụ nke ya, ndị na-ekiri ya na ndị na-agba ọsọ usoro ndị a na-agbasa n'etiti ugwu alps na pyr enees na ndị a nkebi ugwu ọtụtụ puku mita ịrị na izu atọ i nwere ike ma na-ejedebe na a n'elu nke a ibu ugwu dị ka elu rutere ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe a ogologo eriri rịdata mgbe a nnukwu ịrị ndị a nkebi mgbe niile na-akpali akpali na ha na-a nnukwu ikpebi ihe na nyocha oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri njem njem nke France ị ga-abụ ezigbo oge ikpe a na-akpọ agbụrụ ahụ megide elekere, n'ihi na ọ bụ mgbalị mmadụ n'otu oge nke onye ọ bụla na-akwọ ụgbọala n'oge dị mkpirikpi otu Nkeji n'otu oge, ndị na-agba ịnyịnya na-eji ụgbọ ịnyịnya ígwè pụrụ iche na akụrụngwa aga ngwa ngwa dị ka o kwere mee n'okwu nke aka ha.
Oge ọnwụnwa nwere ike ime na mpaghara ọ bụla, site na egwu ndị dị larịị ruo ebe dị egwu na ọbụlagodi ugwu dị ọcha na-enye ohere dị ukwuu maka ọkwa zuru oke iji tinye oge dị ukwuu na ndị asọmpi. A na-anwale ule oge otu n'otu usoro ahụ dị ka ọnwụnwa nke oge ọ bụla, mana ndị otu ahụ na-agba ha ugbu a otu ọ bụla na-apụ ma na-agbagharị na nhazi usoro, were ya na nnụnụ na-akwaga n'ụdị V a buru ibu, nke a na-enyere aka imebi ifufe ma debe ya ije ije dị elu dị ka ndị ọrụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee. Ugbu a ndị otu niile na-amalitekọ ọnụ na oge ikpeazụ enyere enyere bụ onye na-agba nke ise gafere agba ọsọ, mana ha na-ebukarị mmadụ asatọ agba.
Ya mere, mgbe ha nwere ndị ọkwọ ụgbọala asatọ ma ewepu atọ nke ahụ bụ ise, yabụ ha na-enwekarị ndị ọkwọ ụgbọala atọ na-eme ihe ha nwere ike. Anyị na-atụgharị Calla gburugburu ma na-ere ọkụ nke ọma, ha ga-aga nke miri emi ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịhapụ nso na njedebe, ịhapụ ndị ọzọ ka ha gaa n'ihu na-enweghị ha, ndị na-agba ịnyịnya a na-agagharịkarị n'ụzọ nke ha iji chụọ otu ha Onye ndu, ugbua ikpe otu oge, ọ bụrụ na emee nke ọma, ọ dị ka igwe mmanụ nwere mmanụ nwere nnukwu uru karịa ndị ọzọ, na-agbaso ụdị mmemme a, onye mmeri niile nke Tour de France bụ otu onye na-agba ịnyịnya nwere oge kachasị dị ala. na njedebe nke 21st, nke kwụsịrị na akara ngosi Champs-Elysees na Paris kemgbe 1975, nnukwu ìgwè ndị na-agba ịnyịnya nọ na njem a maara dị ka Peloton thepelotonis nwere ìgwè 22 nke ndị ọkwọ ụgbọala asatọ, nke nke ọ bụla rụpụtara na 176 ọkwọ ụgbọala na mmalite. Otu ọ bụla mejupụtara ndị kachasị mma na-eme ndị bụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè kwa afọ.
Ndị otu egwuregwu nke abụọ nke nwere ngalaba abụọ nwere kaadị idere ma a na-ewere ha dị obere, ọ bụ ezie na ndị otu egwuregwu nwere ohere dị mma maka otu ndị a ka ha bụrụ ndị otu pro -continental iji gosipụta ndị na-akwado ha n'ọsọ kachasị nke oge ahụ, na-asọmpi Bigworld Tour Ndị otu egwuregwu nwere ike ịdọta ndị na - egwu egwuregwu na - achọ ịdebanye aha ha maka njegharị ụwa na oge na - abịanụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala na - eme ka agbụrụ ahụ dị na breakaways iji nyekwuo ndị na - akwado ha ohere, ka o kwere mee, ugbu a ndị otu ga-elekwasị anya ihe dị ka otu ndị ọkwọ ụgbọala abụọ ma ọ bụ abụọ ahọpụtara dị ka ndị isi otu egwuregwu ga-achọ iji merie ọkwa nke ọ bụla ma ọ bụ onye ndenye ọkwa zuru oke nke ebumnuche ya bụ imeri Tour de France, n'ozuzu ya, yana onye ndu ndị ọzọ nke s nwere nke domestiques, nke putara ndi ohu ugbua ulo uka ugbua na nkwado nke ndi ndu ndi otu ha, na-achuru ohere ndu ha ma na enyere ndi otu a aka imezu ya r Toredomestiq ndị mmadụ na-agakarị n'isi otu a iji belata ije ọgụ ọgụ belata onye ndu site na ifufe nnoo iji chebe ikike onye ndu ahụ n'ụzọ zuru ezu, ndị bi n'obodo ahụ na-alaghachikwa n'ụgbọ ala otu ịnakọta nri, ịnata iwu, iji nweta karama uwe maka ndị ndu ha, ọ bụrụ na onye ndu ha nwere nke nwere Taya nwere ntụpọ n'akụkụ ụzọ ebe ụgbọ ala gị enweghị ike iru gị, nye ha igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe nke ha iji mee ka ha laghachi n'ọgbọ ahụ ugbu a dị ka o kwere mee mgbe ọkwa ọ bụla nwere naanị otu onye mmeri na Tour na-emeri naanị otu ọkwọ ụgbọala na ngụkọta. Mmeri ndị a bụ n'ihi otu ọrụ impeccable nke mmadụ asatọ niile na-etinye ọnụ, ọ nweghị onye nwere ike imeri njegharị de france naanị ọ gaghị ekwe omume otu ilu ilu ochie na-eme ka nrọ ahụ nwee ihe ịga nke ọma na njem ahụ bụ ihe ngosi mara mma nke dị iche iche nke agba ndị na-achagharị. france a mix nke afọ iri na ụma uwe mere nke na-enwu gbaa nkwado logos na-akpali akpali ihe nakawa etu esi na obi ike na agba bụ n'ezie a Lee n'etiti niile mgbe otu jerseys na i nwere ike ịhụ na-aghọta gị uwe ugbu a, ị ga-ahụ anọ karịsịa dị mkpa jerseys na a ga-ọdịda na njedebe nke ọ bụla ogbo na onye ndú nke otu nke anọ dị iche iche nhazi ọkwa The odo Jersey Le Mayo Jean bụ isi na ihe ndị kasị prestigious jersey nke ndị njem Tour de France nwere oge kachasị dị ala na egwu ahụ, onye na-acha odo odo bụ odo, ekele maka Magazin French, Auto, nke kwalitere agbụrụ ahụ na mbido narị afọ nke iri abụọ, emere ya na akwụkwọ edo edo edoziri nke edere ugbu a bụ onye na-eyi uwe a na njedebe nke ogbo 21, njem ahụ de France na-enweta nkwanye ùgwù na ndụ niile site na ndị ọgbọ na ndị Fans ma jiri ego nrite nke 500,000 euro na-acha ọcha le mile block jersey na-acha ọcha jersey na-egosi onye ọkwọ ụgbọ ala kachasị mma nke agbụrụ a bụ onye kachasị etinye ọkwọ ụgbọ ala n'ogo zuru oke n'okpuru 25. January mbụ na nwoke ọduọ afọ 'ike na-edo edo jersey na-acha ọcha jersey n'otu oge na nke a na-acha odo odo jersey ugbu a prioritized mgbe nke abụọ ebe na-eto eto ọkwọ ụgbọala na n'ozuzu ọkwa ga-eyi na-acha ọcha Jersey na njedebe nke njem onye na-eto eto kachasị mma na-ewe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ a na-akpọ Lumaio ver bụ onye na-agba ọsọ ọsọ n'oge agbụrụ ahụ niile. A na-enye ndị isi maka onye ọkwọ ụgbọ ala mbụ ịgafe akara akara A na-enye isi ihe ndị dịnụ kwa ụbọchị, mana isi ihe dịnụ dịgasị iche dabere na ụbọchị Na mgbakwunye na isi okwu ndị a kwa ụbọchị na-ejupụta n'okpukpe nke a na-eme tupu de mgbe agbapụ, agbụrụ ndị ahụ na-atọ ụtọ.
Malite-n'isi Sprint ihe na-ọdịda ihe ma na etiti sprints na na n'isi sprints na onye na-anya ya na ihe ndị kasị na njedebe nke agbụrụ wears green jersey. Ugbu a, ọ bụ onye na-agba ọsọ na-emeri jersey a, onye na-anakọta isi mgbe ọ meriri nkebi ma na-ejedebe mgbe niile n'elu 15 na nkebi nke ọ naghị emeri na ugwu dị elu na-alụ ọgụ maka ndị na-apụ apụ ị nwere ike ịchekwa egwuregwu ahụ. ọbụna n'ụbọchị mgbe ị na-enweghị ohere nke price nke green jersey bụ iri abụọ na puku ise euro, na dotted jersey la moi poirous in a similar way to the friends of the intermediate steps at the top of each isi climb point for the ndị na-agba ịnyịnya ole na ole iru n'elu, ọnụ ọgụgụ nke isi dị dị iche na nhazi nke ịrịgo ahụ ka ọ na-esikwu ike ọrịrị ugbu a ka a na-enye ndị ọkwọ ụgbọ ala ihe ndị ọzọ kachasị ugwu na-eyi na jersey dotted na-ewere 25,000 euro n'ụlọ ya na njedebe nke njegharị ahụ. Ka anyị kwuo maka ndị na-agba ọsọ Sprinters na-achọkarị imeri ọkwa dị larịị na-echebe onwe ha site na ifufe n'azụ ndị otu ha ụbọchị niile na-anwa ịnọ n'akụkụ elu na-ezere nsogbu mgbawa site na ngalaba teknụzụ na-ezere mgbanwe mgbanwe ikuku na-akụ ụdị ihe niile sprinters n'ụzọ nkịtị mana mgbe ha na-akwa ụta. emetụla ifufe aka mgbe ọ bụla, ha na-ezobe n'ihu peloton ahụ ruo otu narị mita gara aga, ebe ha na-apụ n'azụ ndị otu ha nyere ha nnukwu ụzọ iji mebie mmeri ahụ ka ha wee nwee ike ịgbaru ihe mgbaru ọsọ ahụ. ike dị ukwuu ọbụlagodi obere oge na ị dị oke ọsịsọ Beingbụ onye na - agba ọsọ bụ ọrụ pụrụ iche ma dị egwu Ọkwọ ụgbọ ala ndị na - emeri sprints na - esiri ha ike ịlanarị ugwu dị elu You naghị anụkarị gbasara onye na - agba ọsọ na otu nkọwa ahụ na njedebe nke njem ahụ na-agba ọsọ tendenzie na-esote awa ole na ole n'azụ ndị mmeri n'ogologo, n'agbanyeghị na ị nwere ike merie ọtụtụ usoro na njem ahụ a na - emeri ndị ugwu site na ndị ọkachamara na - arịgo ugwu ndị a na - arụ ọrụ na - arịgo ma ha na - eme ngwa ngwa na - abụkarị ndị na - agba ịnyịnya na - achọ iji merie njegharị ahụ mana agbụrụ ahụ nwekwara ndị na - arị elu na - enweghị mmasị na agba odo.
Ha nwere nanị otu ebumnuche, iji merie ndị mbata na ugwu. Ugbu a, onye na-agba ịnyịnya chọrọ mmeri njem ahụ n'ozuzu ya nwere ike ịrị ugwu nke ọma, yana ikike nwere ike ịmepụta oke oghere na njikọ ahụ ma hapụ ndị asọmpi ha ka ha tufuo oge dị ukwuu n'ogologo. otu mgbe ọ bụla a nwalere oge ọnwụnwa dị mkpa kachasị mkpa na agbụrụ agba ga-enwe opekata mpe otu oge kwa mbipụta nke njegharị a na France, mana ụfọdụ na-agbakwunye mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụ karịa karịa ndị isi otu ndị meriri ogo ya na njegharị g chọrọ. mmeri ga - enwerịrị ike iwepụta ezigbo oge ikpe oge ikpe oge na - adịkarị site na nkeji iri atọ rue elekere, ndị ọkwọ ụgbọala nwere ikike imeri nkeji tupu ndị ha na - agba ọsọ ma ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma ịbụ ndị na - emeri mmeri na nka. oge ikpe ga-enwe nnukwu uru karịa onye Agc na-ese okwu bụ onye na-adabere na ịrị ngwa ngwa na ugwu iji nweta oge ugbu a na mgbakwunye na oge ikpe na-enye onyinye ego kwa ụbọchị maka ndị atọ na-agba ịnyịnya na njedebe h akara nwere sekọnd isii na anọ maka nke mbụ, nke abụọ na nke atọ ebe Women Tour de France Kasị nso na peloton ụmụ nwanyị Nnukwu njem izu atọ na-eme na Girorosa, agba ọsọ ụbọchị 10 nke na-amalitekarị na July yana ụlọ ọrụ ahụ na-ahazi njegharị na-agagharị na njem nke ụmụ nwanyị na-agba ọsọ otu ụbọchị kemgbe s enwegoro n'otu ụzọ ahụ dịka ọkwa nke agbụrụ ndị nwoke ruo ọtụtụ afọ. Nke a bụ ụzọ dị larịị gburugburu champs-elysees na paris nke ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-ekpebi ihu ịnyịnya ụmụ nwanyị ruo mgbe ebighi ebi ọ ga-abụ nnukwu nzọụkwụ iji nwee egwuregwu nha anya n'ezie na m maara na ọ ga-abụ ihe ịtụnanya nwee ike ihu ihe a ma bie ndụ ok enwere m ihie ụzọ kedu ka m ga-esi hụ ebe kachasị amasị anyị iji hụ ndị njem na agbụrụ gcn gafere mana mana enwere ike anyị nwere ntakịrị ntakịrị mana ma e wezụga njem ahụ anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ dị ukwuu agbụrụ n’afọ n’afọ, mana gcn dị ọhụụ? Race Pass nwere ihe niile ịchọrọ, ọ nwere ụdị atụmatụ dị iche iche dị ka profaịlụ ọkwa, ndepụta mmalite, ihe ngosi kwa ụbọchị mgbe nyocha agbụrụ na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ, ọ nwere ezigbo ihe niile ịchọrọ, ma ị bụ onye na-ekiri ekiri ma ọ bụ a oge mbụ fanatic a igwe kwụ otu ebe bụ na nke ahụ bụ ya tour de francethe nnukwu show isi ihe omume n'ụzọ nkịtị nnukwu ihe omume nke afọ na ịgba ígwè ụwa na njem bụ a oké mmalite ma ọ bụrụ na ị hụtụbeghị agbụrụ agbụrụ tupu ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye anyị ume ma ọ bụrụ na ị maara onye na-abanye ugbu a na ịgba ịnyịnya ígwè ma nwee ike ịchọ ịmata banyere agbụrụ ịgba ịnyịnya na njegharị.
Ego ole ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè de Tour de France na-akwụ?
Chris Froome nke atọTour de Francemmeriiriteụgwọ ọnwa ya ruru ihe dịka 4.77m kwa afọ. Alberto Contador nọ na ụgwọ ọnwa 4m, ebe Vincenzo Nibali, onye mmeri nke 2014 na-akpata obere obere ihe dị ka 2.9m-3m. Riesgwọ ọnwa na-abawanye na arụmọrụ. Dị ka onye na-agba ọhụrụ Froomegarụgoro 95,000 mgbe e binyere ya aha ya na Team Sky.
Connor abụghị onye ọbịa na ịnagide otu nsogbu abụọ ma ọ bụ abụọ, mana maka isiokwu a anyị nyere ya nnukwu, n'agbanyeghị na anyị kwuru na ọ dị ka ọ dị ezigbo njikere maka ya, anyị rịọrọ Connor ka ọ gaa Tour de France agbanyeghị - Nabata ihe ịma aka nri. Ọ nwere ike iri nri onye ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè na-eri? otu ụbọchị na tour de franceso m ga-agbasochi nri nkezi nke njegharị de franceride na anyị chere na onye na-agba 70 n'arọ na-erepịakwa nkezi nke 6,700 ka 7,000 calorie kwa ụbọchị na tour de france ga-abụ nke dị ịtụnanya m ga-eme daalụ Ennavit na Trex Segafredo onye na-edozi ahụ bụ Steph Skirling maka ịmepụta atụmatụ nri na-edozi ahụ maka m taa ma enwere m ike ịhụ ma m nwere ike ịrapagidesi ike na ya n'ihi na m ga-anwa iri ihe niile na ndepụta a ma aga m agwa gị ihe bụ ogologo ndepụta, rie ezigbo nri ụtụtụ ma n'ụtụtụ a, m nwere nri ụtụtụ dị ka nna ukwu dị ka nnukwu onye mmeri m nọ na nrọ m, mana chefuo agbanyeghị na enwere m pancakes abụọ na menu taa na syrup maple, otu efere oatmeal na mmanụ a ,ụ, akwa abụọ na Mpekere abụọ nke tost nke dị na menu na ọ ga-abụ nnukwu nri nke ụwa Beingbụ calorie 1350 kwa ụbọchị, ya mere kwadebe m maka ụbọchị ahụ, kwadebe m maka nnukwu ụbọchị ịgba ọsọ na onye agụụ na-agụ m, ya mere na-enweghị oge ọ bụla iji mee ya, ọ dị mma ịme nke ahụ na m ownlọ nke gị ị ga - arụrịrị ụka banyere ị nweta nri sitere na nri nkụ nri ụtụtụ nri ụtụtụ akwadebela n'agbanyeghị na ọ na - atọ ụtọ nke ahụ mana ọ na - echetara m ego ole ị ga - eri n'ụtụtụ mgbe ị nọ n'ọsọ ọ bụla, tupu mụ agaa agbụrụ m, m ga-enweta kọfị n’ime m. Echere m na nnukwu ụjọ m na-ejide n'ọsọ ahụ na ịga ụlọ ịsa ahụ na kọfị nyeere aka.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịga n'ụzọ nkịtị n'ụtụtụ yabụ m nọ na bọs ma ọ bụ traktọ, dịka ị nwere ike ịchọpụta, n'ihi na enweghị m ụgbọ ala otu iji mee ka m bido mana ebe m so gcn nke a bụ ihe m nwere ka m kacha wee mee ya na bọs ọtụtụ ndị njem Tour de France ga-enwe banana na nke ahụ bụ nke m Nchịkọta bụ Planttoday banana calorie 105 naanị iji mee ka ọkwa shuga toro iji hapụ ike banye n'ime akwara ma ana m eche ka ọgọ nwanne m Nigel kpọta m na mbido agbụrụ m taa, ọ kabeghị ihu, yabụ ana m atụ anya na agaghị m latenigel bịa ugbu a bụ m n'ahịrị mmalite nke njegharị France mana m na-eche maka nri m ga-eri taa maka na ọ bụ ọnụọgụ ego, enwere calori 2 58 m nọ n'oge taa A ga-eri agbụrụ a ma anyị kwuo na agbụrụ ga-abụ ihe awa anọ ogologo ka menu nke ahụ ga-abụ karama mmanya egwuregwu isotonic na-a drinkụ kwa elekere yana kwa nri abụọ nke nri na-edozi kwa elekere, yabụ coul a d niile dị ka achicha osikapa Brioche ebe nchekwa ma ọ bụ ageland, m ga-eri glọl abụọ caffeine n'ikpeazụ naanị iji jide n'aka na m na-enweta uru ị maara ihe m na-ekwu na soy enwere m ọtụtụ ihe ọ bụla m ga-ewere a musette na-ebu ya niile naanị iji nweta ya ala, ọ dị ka akpa nri nke dị oke njọ na ọ ga-abụ nnukwu nri nri mgbe ị na-eri ọtụtụ ihe karịa nri nri ọ bụla nke ka mma iwepụta oge? Nweta nri n'ime ugboro abụọ n'otu awa, yabụ gịnị ka m ga-aga? Enwere m mmanya n'ebe a. Echere m na echere m mgbe m hụrụ balet, gịnị ka m nwere n'akpa aghụghọ? nke ahụ bụ otu akụkụ niile dị mma ihe na-abịa mgbe ahụ anyị nwere ezigbo nri m chere na banana ọzọ banana ọzọ kedu ka m ga-esi meghee ya ọ bụ ntakịrị moldi ọzọ akụkụ nke ọma na-esote ebe ahụ ị ga-eri ma ọ bụ na-esote nri nri nri briochehy kedu ka ihe mkpofu don ' Echefukwala ete homebananas ike mmanya osikapa achicha gels site onu. Ugboro abụọ kwa awa ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị iri 60 ruo 90 gram nke carbohydrates site na nri ndị na - agbagha ngwa ngwa dịka gels egwuregwu na mmanya.
Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ahọrọkwa nri ndị nkịtị dị ka ginger gara ịgụ ma ọ bụ unere, mana nke ahụ nwere ike iburu ya na nke mbụ nke njem ahụ, gwa gị ihe nke ahụ bụ, agbụrụ gara n'ihu na nkwụsịtụ dịka a ga - asị na asọmpi ahụ enweghị ' t adị m nnọọ ofufe ọ doro anya na ọ meriri, Amaghị m ihe mere ndị ọzọ nke agbụrụ, ma um na agbanyeghị m riri nri m niile, niile dị njikere, ekpe na nri ugbu a, m ga-aga otu ụgbọ ala ma mee mgbake na uru nke mgbake ahụ abụghị naanị protein na carbohydrates, ọ na-edozi mmiri mmiri ị tufuru mgbe ị na-agba ọsọ ọsọ ahụ, ọkachasị n'oge ọkụ, nke ị na-enwetakarị na njem nlegharị anya, yabụ A lara m ezumike na kichin m n'ihi na ọ dị nwute na bọs m enweghị ebe a na-esi nri kacha mma dị ka ndị agha ndị ọzọ na-agagharị na mba ụwa, yabụ m laghachiri na kichin ka m mee nri m na-agba ọsọ na frizzy ma ana m ekwu na nke a bụ n'ezie ihe siri ike nri nke bara uru calorie 765 ka nri wee dịrị ahụ n'ahụ mgbe niile ahụ iji nagide Absorb fluids ruo mgbe ha lakpuru ụra showokay, nke bụ ihu ọma a kwesịrị ekwesị nri ọ na-eri na otu ụgbọ ala ozugbo agbụrụ, na gburugburu na-eme ihe n'eziokwu, nke a bụ mgbe m ọkacha mmasị nri nke ụbọchị. Ahụrụ m oge a n'anya na Team Buster. Otu ihe na-agụ m maka agbụrụ ahụ ma ọ bụrụ na m kwuo eziokwu, ịnwere redio na obere egwu na-atọ ụtọ ma ị nwere nri mara mma ị ga-eri n'ụzọ ụlọ nkwari akụ.
Echere m na nke ahụ bụ isi n'ihi na mgbe agbụrụ ahụ kwụsịrị, ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-enwe nnukwu ezumike ruo mgbe ha riri nri abalị ha ma ọ bụrụ na ha enwetaghị nri ahụ tupu ha amalite? ịhịa aka n'ahụ tupu ha abanye n'ime ụlọ nkwari akụ ha, tupu ha akwọọ ha oge ụfọdụ gaa na họtel na-agba ọsọ, mgbe ahụ ị nwere ike agụụ ga-adị mfe ma ị chọghị nke ahụ? ya bu na ogologo ije dika Tour de France ebe ichoro inweta nri ndi ahu n’ime aru gi, noro izu ike ma akwara gi di njikere maka agba nke echi, oburu n’echiche na m rie calorie 2600, mana mgbe m gbara Echetara m na agụụ na-agụ m oge niile ugbu a enwere m afọ ojuju oh nri nri agbụrụ dị njikere ka m wee rute n'ụlọ ịgba egwu m nwetara m nri Ate mgbe agba ọsọ ahụ na nke a bụ oge m ga-enweta ịhịa aka dị mma ya mere m na-achọrọ nke m? Niggle na-iwu ịhịa aka n'ahụ m, ma ọ dị ka ọ nọ ebe a, ọ sịrị na ọ ga-ịhịa m aka na mgbe ụfọdụ ị ga-eme ma ọ bụrụ na enweghị ya, n'ụzọ bụ isi ị ga-eche n'echiche na m ga-ete aka, naanị gị maara ihe ịma aka m ihu N'ezie, mana kedu ihe ị ga - eme iji weghachite tupu nri abalị ugbu a, nke bụ nnukwu nri ọzọ, kwadebe ugbu a maka ụkwụ ọzọ na - ekpo ọkụ na Tourde Franceright Dinner ma maa ihe ndị ọzọ carbohydrates dị, iji mee ka ụgbọ oloko nri na - aga? g maka ụbọchị ọzọ dị ukwuu n'ụtụtụ n'ugwu ụtụtụ 1090 calories maka nri abalị a trek sega fredericks ga-enwe nnukwu afọ, nke ka mma na kichin ochie na menu maka nri abalị anyị nwere efere tomato ofe na vermicelli200 g ọcha azụ 125 g raw weight quinoa250 g grilled vegetables a mpempe arụrụ n'ụlọ pieright nri mbụ nke nri abalị bowler ofe tomato ofe na obere vermicelli, ọ dị mma, ugbu a ọ bụ isi ihe maka nri abalị na m nwere quinoa ọzọ, jiri nwayọọ nwayọọ wepụta carbohydrates na ọtụtụ carbohydrates, gụnyere ụfọdụ azụ ọcha nke ahụ bụ ọzọ na Ahịa na protein na m ga-agwa gị maka ya You nwere oke akwụkwọ nri 250 grams nke grilled vegetables huh mma were ya n'ime m enwekwara m apụl achịcha maka pudding nke ahụ bụ ọtụtụ akwụkwọ nri, otutu protein, oh ugbu a juputara m nke bụ nri abalị siri ike ịnụ ụtọ n'agbanyeghị na apụl achịcha dị ezigbo ụtọ mana nri anaghị akwụsị n'ihi na enwere m nri ọzọ tupu m lakpuo Post Post-Bed-SnackỌ bụghị Notpost-Bed m ga-anọ na nrọ m Oge kwesịrị ekwesị maka nri nri akwa m na m ga-agwa gị ihe nke ahụ abụghị nri ma ọ bụ nke ahụ buru oke ibu, lee ya anya, ọ bụ nnukwu gram 250 nke strawberries, echere m na m ga-eme mee ka ọ bụrụ strawberry, ọ bụrụ na m rie nke ahụ na Tour de France, aga m atụgharị na strawberry ugbu a n'ihi na ihe niile dị n'ime afọ m, mana ọ nwekwara gram 250 nke yogọt protein dị elu, nke ga-elo protein naanị tupu ị lakpuo ụra iji mee ka mgbake akwara na-aga na mgbe ị na-enweghị ike? Chọta yogọt dị elu, mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta obere yogọt ma tinye naanị protein whey ma gwakọta ya na 30 gram kwesịrị ime ma bulie obere protein tupu ị lakpuo. Echere m na m ga-enweta ya na methen kwesịrị M ga-enwe obere nri ole na ole mgbe m na-anya ụgbọala, nke a ga-abụ oge na-adịghị mma m ma ọ ga-amasị m ịnọdụ ala n'ihe ndina ma gụọ akwụkwọ, lelee Netflix, mana ebe ọ bụ na anaghịzi m anya ụgbọala m ga-eme na-enweghị asọmpi TV gcn, Ọ dị mma, ugbu a, enwere m oge maka izu ike na ihi ụra ụfọdụ, n'ihi na echi anyị nwere nnukwu ịnya ụgbọ ịnyịnya na iri ụbọchị, na-ekelekwa Steph Skirlink na Trex Alfredo maka atụmatụ nri na, karịa ihe niile, njedebe nke nri agbụrụ mechie m ma ọ bụrụ na ọ mere ka m rie nke ọma ọ bụkwa akụkụ nke Tour de France, ebe ọ bụ na ịgba ọsọ ga-ejikwa nri gị, na-ejikwa shọvel ya na ihe ndị yiri ya ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ ihe ndị na-agba ịnyịnya na-agabiga. otú afọ ha si arụzu ihe niile m chere n’eziokwu achọrọ m ụbọchị f echi Echere m na m ga-eri nri ihe ọ Dụ Juụ Detox ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana maka ndị na-agba ịnyịnya na njem ha ga-eme ya ogologo izu atọ kwa ụbọchị ọ bụ ihe mara mma nke mere na nke ahụ bụ nri ndị na-agba ịnyịnya njem n'ụbọchị, chee na ị nwere ike iri ya niile maka izu atọ, ka na-enwe na njedebe, ka m na-aza ajụjụ n'okpuru mara ihe ị na-eche nke m tourrider nri? daalụ maka ikiri onye ọbụla hụrụ gị n'oge adịghị anya
Kedu ọsọ ọsọ kachasị ọsọ na Tour de France?
Nwetụla mgbe ị nọdụrụ n'ụlọ wee lelee Tour de France na kedu ka ndị na-agba ịnyịnya a si bilie ọsọ ọsọ? - Ekwenyesiri m ike. Ọ dabara nke ọma, anyị nwekwara obere ahụmịhe iji soro gị kerịta. - Ooh, ee, anyị na-eme. (egwu elektrọnik dị jụụ) - Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo ka ewu ọhịa na Tour de France, ị ga-ebi kwa sekọnd nke ụbọchị ọ bụla yana itinye uche gị n'isi.
Na-agbago ugwu, ngwa ngwa.- Ee, ị ga-aza ajụjụ maka obere gị, ịnweghị ike ịnọdụ ala ma rapara na nnukwu mmanya chocolate na February dị ka anyị niile hụrụ n'anya ịme, wee chọọ ịrị elu ugwu ngwa ngwa Julaị. Echere m na ọ bụ onye na-agba ọsọ ruo n'ókè ụfọdụ, onye na-erughị? Ọ bụrụ n’ị lekwasị anya n’ịgba ugwu ọsọ ọsọ, ị nwere ike ịkpa àgwà a.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa na Tour de France na July, ị ga-ahụ maka mmebi ọ bụla si n'ọnụ gị pụta. Otu ihe ahụ na-aga maka ihe ọ bụla i mere, kwa. Omume ọ bụla na-enwe mmetụta na-agwakọta na ahụ mmadụ.
Dị ka ihe atụ, were ya na ị nọ n’okpukpu nke atọ nke otu ụlọ ma na-agba ịnyịnya ma na-agbadata ma ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n’ụbọchị. Nke ahụ bụ usoro 28,800 tupu ị mee njem Tour de France. Yabụ ọ ga-aka mma iji igwe mbugo ahụ mgbe ụgbọ elu awa asaa ahụ siri ike gasịrị? a Tour de France ọkachamara.
N’ikwu okwu banyere nri, enwere m onye otu ibe m nke na-eri naanị oat na mmiri ruo izu abụọ tupu agba agbụrụ ukwu. Ahụ adịchaghị ike ịnweta ụdị nri amachibidoro, mana ọ mere ngwa ngwa ngwa ngwa. - Otis na mmiri? - Ee, iwe. - undsda jọgburu onwe ya.
Ka mụ na Chris na-arịgo Col Madeleine, ọ na-arịgo. Ya mere, ọ ga-abụ na ọ bụ oge dị mma ịgwa onwe gị ntakịrị gbasara ọzụzụ elu. Ọzụzụ elu dị elu etolitewo ewu ewu na afọ ndị na-adịbeghị anya Tour Proshave anwalela ụdị ụfọdụ nke ogige dị elu, ma ọ bụ ọzụzụ dị elu, n'oge ụfọdụ n'oge ọrụ ha. - Ugbu a okwu mmalite bụ ịrahụ ụra dị elu ma zụọ ala.
N'ikpeazụ, mgbe anyị na-ehi ụra na elu, mgbe anyị na-eku ume ikuku ikuku, a na-amanye ahụ anyị imegharị site na ịmepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie karịa nke na-ebuzi oxygen na akwara anyị, nke bụ isi nke arụmọrụ aerobic. Ee ee, ị nwere ike ime otu mgbanwe ahụ site na nkasi obi nke ụlọ gị site na iji ụlọ hyperbaric ma ọ bụ ụlọ elu dị elu, enwere nnukwu nrụsi ike na ịga njem ebe ndị a dịpụrụ adịpụ. Nke a bụ n'ihi na ndị egwuregwu anaghị enwekarị ihe ndọpụ uche, nke pụtara na ha nwere ike ilekwasị anya na ọrụ ha.
O siri ike na elu ugwu, ọ bụghị ya? - Ọ bụ ọsọ a.- Ọzụzụ maka ịdị elu abụghị maka onye ọ bụla ma ọ ga - ewe obere oge iji mee ya, mana ndị na - agba ịnyịnya kwuru na-ekwu na ọ bụ nke ha na-adigide na-abawanye site na 10%. Kedu nke nwere ike were afọ abụọ ma ọ bụ karịa iji mezuo.
Agbanyeghị, ndị a bụ ndị na-aza okwu dị elu, n'adịghịkwa ka uru ahụike dị mma, ndị a anaghị adịru mgbe ebighị ebi. Naanị ụbọchị 10 ruo 20 nke pụtara na achọrọ njem ọzọ njem ọzọ - N'agbanyeghị otu ị dabara dị ka onye na-agba ịnyịnya na-amakarị, ịrị elu ọsọ ọsọ dị ka Tour de France pro bụ naanị ihe ezi uche dị na ya maka otu ihe kpatara ya. Ga-amalite isi.- Ee, ikuku na-agba ọsọ ọsọ nke ihe dị ka kilomita 20 kwa elekere na-enyere aka ịrịgo.
Ọ bụghị naanị na ọ na-enyere aka ọsọ, mana ọ na - enyere aka ịbawanye ọsọ na ịrịgo. Mgbe onye ọ bụla na-agba ọsọ, ọsọ na-agba ọsọ ọsọ na onye na-agba gị n'azụ nwere ike ịnọ na wiil ahụ ogologo oge o kwere mee. Odi nma, cheers, enyi! - Ugbu a ị nwere ike ịnọ na-eche na onye ọ bụla nke na-anọdụ n’elu igwe kwụ otu ebe na-erite uru na nke a.
Ma nke ahụ abụghị eziokwu. Ugwu na-ejikarị ihe akpọrọ ihe. Nke a pụtara na onye na-anya ụgbọ ala mbụ na-agagharị site na eriri ahụ, na-eme ka ọ dị ntakịrị ma mmetụta a na-ewusi ike site na otu azụ.
Nke ahụ kwuru, mgbe onye na-agba ịnyịnya 10 na-ahapụ nkuku ahụ, ha ga-agba ọsọ iji jide wiil ma ọ bụ roba ga-adọka ma ha ga-ahapụ wiilị ahụ maka ndụ, rie nri ma lekọta usoro gị niile na nhazi gị, zuru oke banye n'ọsọ ahụ. Mana enwere ihe na - egbochi gị - nke ahụ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa gị! Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala bụ nanị mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ike ịhazi ikuku oxygen ma mepụta ike n'otu oge, niile ka ị na-arụ ọrụ karịa ndị ọzọ - ndị a bụ ngwugwu zuru oke.
I nwekwara ikike nke uche na ikike iji kwado ya. Ọ bụ naanị adịghị mma - Enwere m ike ịla ụlọ ugbu a, echere m. - Eeh. - N'agbanyeghị ihe ụlọ ọrụ mgbasa ozi ma ọ bụ ndị enyi gị na-a pubụ mmanya ga-eduga gị na ikwere, ịgba ịnyịnya ígwè bụ n'ezie egwuregwu dị ọcha karịa ugbu a karịa ka ọ dị afọ 20 gara aga.
N'oge ahụ, ọsọ ha nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè ha ga-agba bụ n'eziokwu dị ịtụnanya - ihe kpatara nke a bụ naanị doping. Echere m na ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo dịka Tour de France pro afọ 20 gara aga, ị ga-enweta mmanya nke ihe na-akpali akpali na ndị na-eme ka ọbara si na Chopson gị, nke ahụ bụ ihe anyị na-anaghị akwado. Ihe omumu egosila na igaghi enwe ike igbanye inyinya-ibu ka oso.
Yabụ, echere m na agaghị m egbusi oge gị dị ka Tour de France pro. - Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a, nye ya nnukwu isi mkpịsị aka. Maka ntuziaka ndị ọzọ, pịa m mara mma Orbea.
Enwere ihe kpatara ị ji akwụ ọtọ n’elu ugwu a? - mee ka m yie ogologo (James na-eze ume)
Kedu ihe ndị na-agba ịnyịnya Tour de France na-eri maka nri ụtụtụ?
Kasị ọsọ njem de France: 41,7 kph
N'ụzọ a na-atụghị anya ya, ndịkasịagbụrụ niile, n'ozuzu,bịaran'ime afọ Armstrong. Lance gbagoro 3592.5 km na 86 awa 15 nkeji 02 sekọnd - na nkeziọsọ nke41.7 kph (25.9 mph). O nwere nkwado ụfọdụ. Onye nke ọ bụla nwere ike ịbụ ọbụnaỌsọ ọsọ.
Ọ bụrụ na ị hụla Tour de France ugbu a, ọ ga-abụrịrị na ị hụla ndị na-agba ịnyịnya na-eburu akpa dị ka nke a site n'aka ndị guzo n'akụkụ okporo ụzọ ihe dị ka ọkara site na ọkwa ọ bụla. A na-akpọ ha musettes ma ha juru. Ihe kpatara nke a bụ na ndị na-agba ịnyịnya ekwesịghị ịmalite ụbọchị nke ọ bụla na akpa ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ na-eri nri niile ha chọrọ maka ụbọchị ahụ.
N'ụzọ bụ isi, ha nwere nri ehihie nke ndị ọkwọ ụgbọala. N’isiokwu a, anyị ga-agabiga kpọmkwem ihe dị na egwu egwu, kọwaa ihe kpatara ya, wee gosi gị otu esi eme ụfọdụ ihe pụrụ iche ndị puru iche dị ka achịcha osikapa. Dị njikere ịdenye aha na GCN ma ọ bụrụ na i nwebeghị ma kụọ akara ngosi obere mgbịrịgba ahụ dịka ị ga-enweta ọkwa mgbe anyị bulite edemede yana nke ọma, ọ bụ n'efu ma na-enyere ọwa aka. Nke a bụ egwu GCN anyị, m ga-etinye ya ihe niile dị na ya.
Malite na ihe kachasị ukwuu, karama. (egwu kọmputa dị jụụ) T You na-ahụkarị karama abụọ na musette, ma ọ bụ bidon dị ka a na-akpọ ha ma ọ bụrụ na ị bụ French. Nke ahụ pụtara na mgbe ndị na-agba ịnyịnya na-ewere musette ha, ha na-ekpofu karama ndị dị na igwe kwụ otu ebe ha, nke pụtara na ọ bụrụ na ị na-achọ karama mmiri pro dịka ihe ncheta, ebe dị mma ịnọ ma ọ bụ pụọ ozugbo mpaghara nri na pro pro.
Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche ị nwere ike itinye na karama ma a ga-ahazi ha maka onye na-agba ịnyịnya, dabere na mmasị onwe gị yana ihe a chọrọ. Nwere ike ịnweta mmiri ochie ebe ahụ. Ya mere, ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-eme, mana ị nwekwara ike iji ntụ ntụ dị ka nke a site na ndị enyi anyị nke Canal, Enervit, ha na-abanye ma ọ bụ obere akpa ma ọ bụ ite, ha na-enye gị ohere iji mmiri mineral niile dị mkpa rehydrate. mmanụ ụgbọala na-eburu carbs maka ebe ahụ.
Ihe ọzọ anyị hụrụ dị ka obere omume anyị chọpụtara na Giro, ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya nwere protein na karama ya. Nke a ga-abụkarị ebe dị larịị ebe onye chọrọ Nnukwu Ntugharị Ntugharị, nke a dị ka ụbọchị ezumike maka ha, yabụ na ha ga-enwetụ protein na otu karama ha n'otu oge n'oge oge ahụ iji nyere aka na usoro mgbake a. Onwe m, ọ na-amasị m ịnweta mmiri na otu karama m ma tinye ntụ ntụ ike na nke ọzọ.
Nke ahụ bụ ihe m nwere ma ha ga-aga musette. Ihe na-esote abịa Ogwe ike. Ihe dị mkpa banyere ogwe ike bụ na ha dị elu na carbohydrates na obere olu, nke pụtara na ha anaghị ewere ọtụtụ ohere n'akpa gị.
Ugbu a, ha bịara n'ụdị flavors na ụdị dị iche iche, na ụbọchị ndị a, ha jupụtara na carbohydrates dị mfe iji banye. Mana usoro ohuru nke anyi huru na ndi okacha amara bu na anyi n’aga n’iru ndi nwere protein. Ugbu a nwere uru ọzọ nke inyere ndị na-agba ịnyịnya aka ịgbake ma gbanwee maka ọzụzụ ka ha na-eme ya.
N'ime otu izu atọ Nnukwu njem dị ka Tour de France, obere ihe ndị dị ka mgbake ka mma nwere ike ịme ihe dị iche na m ga-etinye ụfọdụ n'ime ihe ndị a n'akpa m, aga m etinye otu n'ime protein ndị ahụ. Ma ụfọdụ n'ime ekpomeekpo lemon ude ahụ. Ọkacha mmasị m.
Ihe na-esote bụ gels. Ọfọn, gels bụ eleghị anya ndị a kacha mara amara na ụdị, ee ee, Ezigbo Ezinụlọ 'azịza kachasị maka ihe ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eri na igwe kwụ otu ebe, ụdị dị iche iche na uto dị iche iche, mana ọ bụrụ na ị maghị ha, ọ bụ ezigbo viscous, sugary mmiri mmiri ị na-a quicklyụ ngwa ngwa, banye na sistemụ gị ma weghachite ngwa ngwa wee banye n'ọbara ka o nye gị glucose ahụ, fructose na sucrose na ụmụ irighiri shuga ndị ọzọ ha nwere na-eme ka ị dị ike. Ugbu a enwere ụdị gels dị iche iche, enwere gels isotonic iji nyere gị aka ịnọ na mmiri ma ụbọchị ọkụ na-ekpo ọkụ, enwerekwa gels caffeine nke bụ gel na caffeine.
Uru ndị a na - amasị ha iwere ha nye ha ntakịrị mmụba, n'ozuzu ha na njedebe nke ọkwa. Na gels n'ozuzu bụ ihe ha na-ewere na njedebe nke agbụrụ ma ọ bụ ogbo, ha na-amalitekarị ezigbo nri siri ike ka ogwe osisi na akụkụ ndị ọzọ anyị bịara. Ma mgbe ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie mmụba ngwa ngwa na njedebe, gels.
Aga m etinye ekpomeekpo caffeine a nye m maka njedebe nke ukwu ta. Kedu ihe anyị nwere ebe a? ? Cola ekpomeekpo na oroma ekpomeekpo. Abụ m nwoke cola, ana m ewere cola.
Ihe na-esote bụ ihe ị na-atụghị anya ya. Mana ọ bụ ihe anyị na-ahụ ọtụtụ ihe na pro-musettes. Nke ahụ bụ ihe ọ canụ drinkụ mmanya carbonated.
Ọfọn, abụ m mmadụ nkịtị, nke a abụghị ezigbo ike ha. Naanị ịchọrọ ịkọwa nke a ma ọ bụrụ na ị chere na m bụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ bụ obere milimita 150 ka ọ nwere ike ịbụ 330-milliliter nwere ike.
Ọ bụ ezie na ị gaghị ahụ ihe ọ becauseụ drinkụ ahụ n'ihi na m wepụrụ nke a na tebụl Lloydie na ọ bụ biya, tinye ya ebe a-cola Ma nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ ihe ọ coldụ coldụ mmiri oyi na ndị ọkwọ ụgbọ ala, nke ọma, ọ bụrụ na ọ masịrị ha, ọ dị mma maka mmụọ. Ma ị gaghị ahụ oke nha zuru oke na ihe kpatara ya bụ n'ihi na ọ na-enwusi ike ma na-egosipụta ya na gas, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị gas, ntakịrị nri nke ị na-achọghị mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè. Ma anyị ga-etinye ya na musette.
N'ọtụtụ musettes ị nwere ike ịchọta obere sandwiches nke a na-akpọ egwuregwu paninis, nke na-ezo aka na Italian. A na-akwakọkwa ha n'ụzọ ahụ. Ọfọn, ihe ha bụ obere obere ụtọ, ọfụma, na-atọ ụtọ brioche buns dị ka nke a, enweghị ọnya, wee jupụta na ndoju dị iche iche, ọ bụ oge nri ehihie.
Ọfọn, ihe ndozi kachasị amasị Dan Lloyd, ọ na-agwa m, bụ ahụekere ahụekere na obere banana, ya mere, anyị gara ya. Mana agbasawanye chocolate mgbe a na - eche gị rụrụ arụ. Ma kwa ihe obi di nma, nke oma, tuna, ham, cheese, ihe obula, ihe obula gadi.
Ihe ọ bụla ndị ọkwọ ụgbọ ala masịrị, nke a dịkwa na Musette. Ọ bụ ezie na carbohydrates dị na obere sandwich anaghị adị mfe nghọta dị ka ntụ ntụ pụrụ iche, ọ dị mma ịnwe ihe obi na ihe siri ike na n'etiti nri niile nwere ike ịnabata ngwa ngwa ma ọ dịtụ mma maka sistemu nri. Karịsịa n'ime izu atọ.
Achịcha osikapa na-esote, enwere m ụfọdụ ebe a. Achịcha osikapa abụrụla ihe ọkacha mmasị n'etiti ndị na-agba ịnyịnya na pro peloton. Na ezi ihe kpatara ya, osikapa bụ nnukwu ihe na-enye carbohydrates, ọ na-adị mfe nnabata, ma nwee obere nchekasị na nri nri na eriri afọ nke ọtụtụ mmadụ.
Ọ dịkwa ntakịrị na nke fọdụrụnụ, nke pụtara na ọ naghị ahapụ ọtụtụ eriri n'ime eriri afọ maka ike ọ nwere n'ezie. Yabụ na ị naghị ebu ibu arọ nke eriri a, nke na-agaghị eme ihe ọ bụla dị oke mkpa na egwuregwu dịka ịgba ígwè, ebe ike ibu dị oke mkpa. M ga-etinye achịcha osikapa n'ime, ma tupu m mee nke ahụ, ka anyị gaa kichin ma m ga-egosi gị otu esi eme ma kee achịcha osikapa gị. (egwu dị jụụ) Egwuregwu na ogwe osisi bụ isi iyi dị ukwuu nke mmanụ ọkụ ugbu a, mana ị chọghị iri ha ụbọchị niile kwa ụbọchị maka izu atọ.
N'otu aka ahụkwa ndị ọkachamara ahụ. Aga m egosi gị otu esi esi nri esi nri osikapa bụ nke m mụtara n'aka Nigel Mitchell na EF Education First - Drapac, nke a bụ usoro m na-eme nke ukwuu ma enwere m mmasị na uto na ndị enyi m. Ọ na-eme achịcha iri abụọ na achicha ọ bụla dị ihe dị ka gram 23.24 nke carbs yana ihe dị ka 120, calorie 130 ziri ezi, ka anyị gaa kwadebe ha ma aga m egosi gị usoro pro pro, aga m achọ GCN Capron ( Bda mgbịrịgba) ndị a bụ ihe eji eme nri, osikapa na nke mbụ, nke ọma ị kwesịrị iji ụdị osikapa ma ọ bụ ọka risotto, ị nwekwara ike iji osikapa sushi, enwetara m osikapa arborio risotto, gram 500 nke ya.
Obere ude ude dị nro, gram 250, dịka ọ dị na ike. Vanfọdụ vanilla wepụ, ụfọdụ pawuda, naanị ala, cinnamon nkịtị. Sugarfọdụ shuga.
Na ụfọdụ agave nectar ka ha mee ya ụtọ. Nwekwara ike iji mmanụ a honeyụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ, m ga-ebu ụzọ saa osikapa ahụ wee wepụ ihe fọdụrụ na ya, wee chọọ itinye ya n'ime nnukwu ite dị ka nke a, na-ejide n'aka na ị nwere ihe mkpuchi na osikapa a sachara, '' M ga-abụ ngaji atọ m na-eji ntụ ntụ ntụ ọcha mana ị nwere ike iji ụdị shuga ọ bụla ịchọrọ, m ga-agbakwunye tii tii cinnamon ole na ole, anaghị m atụ nke a, naanị m na-egwu ya. Ndien ke akpatre, otu teaspoon nke Them wepụ.
Na ngwakọta osikapa ebe a, ana m etinye mmiri mmiri millilit 800, na -agbalị ịdị mma. Ọ bụrụ na ị tinye nnukwu mmiri, ọ ga-eme ka osikapa sie ike ma sie ike ma ghara ijide ọdịdị ya nke ọma. A na-emezi ngwakọta a na obụpde ma belata ka ọ gbanye ọkụ mgbe esi esi.
Ọ ga-ewe ihe dịka nkeji 10 iji sie nri. Ọ dịkwa mkpa itinye mkpuchi ahụ. Ọ bụrụ n ’ị nwere osi ite osikapa jiri otu n’ime ha maka na ha dị ezigbo mma, mana ọ baghị oke mkpa, inwere ike iji pan, ihe kpatara ị ga-eji nwee ihe mkpuchi ga - enyere gị aka ime ka mmiri baa n’ime ya mmiri olu mgbe nile.
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpuchi, mmiri ahụ ga-ekpochapụ ma ị gaghị enwe ezigbo mmiri maka osikapa. Can nwere ike ịkọ mgbe osikapa esiri maka na isi mmiri niile abanyela ma osikapa adịla mma ma dịkwa nro, yabụ, aga m ewepụ nke a na ọkụ ugbu a, emeela. Nzọụkwụ ọzọ bụ itinye ngwakọta osikapa na nnukwu tray dị ka nke a.
Na ngwakọta osikapa a gwakọtara anyị ugbu a tinye gram gram 250, ị nwere ike ime ya anụ nri, yabụ ị nwere ike iji nri vegan ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji chiiz ude nkịtị. Anyị ga-ejikwa agave nectaror dị ka mmanụ a mentionedụ kwuru. Di na nwunye.
Gwakọta ihe niile. Ugbu a, m agwakọtala ya niile. M na-eji spatula agbasa ya ma dina ya na tray dị ka o kwere mee.
Ọ bụrụ na ị nwere tray ọzọ ị ga-etinye n’elu, mee ya ka ọ dị mma na ọbụlagodi, nke bara ezigbo uru, mana enweghị m ugbu a. Naanị ihe fọdụrụ bụ ikpuchi ya na ihe nkiri nri ma ọ bụ ihe mkpuchi plastik ma ọ bụrụ na ị si na Steeti wee hapụ ya na friji n'abali n'ihi na ọ ga-adị ka ụdị. Ọ dabara nke ọma, m kwadebere ọtụtụ ihe ebe a.
Chere, odighi onye n’ime ya, aghotaghi m. Nke a bụ otú ihe ngosi kwesịrị isi rụọ ọrụ. Chere, ka m dokwuo anya na, ị na-ekwu, m ga-eme ụfọdụ n'oge tupu nke mere na e nwere ụfọdụ mere na mbụ? Ọrụ Anyị kwesịrị ichere. (egwu na-adịghị mma) (ụda mkpu ekwentị) Nke ahụ pụtara na ha dị njikere, n'ihi ya, m nwetara ngwakọta osikapa site na ngwa nju oyi, ọ dịla njikere ugbu a.
M ga-egbutu ya n’ime ihe dịka nha iri abụọ. Naanị m ga-enye ya nku anya n'ihi na m na-apụ apụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta nke ọma, ịnwere ike iwepụta teepu ahụ.
Aga m egosi gị otu esi kee achịcha osikapa nke ọ bụla. Maka nke a ịchọrọ ihe nkiri akpụkpọ anụ jiri akpụkpọ anụ. Ugbu a ị nwere ike iburu nke a n'ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa mana ị nwere ike iji foil mara mma na-enweghị akpụkpọ anụ n'akụkụ nke ọzọ, agbalịrị m ya, ọ naghị arụ ọrụ.
Ya mere, m na-egbutu akụkụ nke dị ihe dị ka sentimita isii n'ogologo wee pịa ya na ọkara, belata ya na ọkara na nke ọ bụla n'ime ibe ndị ahụ bụ ezigbo oke maka achịcha osikapa m. (egwu elektrọnik dị jụụ) Were achicha osikapa gị, tinye ya n'etiti akpụkpọ anụ ahụ wee were njedebe ma kechie ya dị ka onyinye. Ghaa ya otua rue na ngwucha, were uzo ozo wee kechie ya.
Ma mgbe ahụ ị ga-enwe ụfọdụ ngafe ma emesịa ị ga-apịa nke ahụ otu a. Iji mepụta egbugbere ọnụ ahụ. Na egbugbere ọnụ ahụ bara uru maka imeghe achicha ahụ mgbe ọ dị n'akpa gị.
I nwekwara ike ide na ya ikwu ihe, na nke a, achicha ma obu ngwugwu. Wee pịa nanị dị ka onyinye. Pịa ewepụghị.
Ma pịgharịa ọzọ. Dịka m kwuru, nke a bụ isi nhazi, ọtụtụ ndị ọkachamara dị ka nnu - obi nwere ihe dịka anụ ezi na cheese n'ime ya. Make na-eme ha mara mma, ịnwere ike ịgbakwunye mkpụrụ, ịnwere ike ịgbakwunye mkpụrụ osisi a mịrị amị dị ka ụbọchị na mkpụrụ vaịn, ihe ọ bụla na-ese ụgbọ mmiri gị, na-arahụ.
Ugbu a, enwere m olile anya na ị nwere mmasị na edemede a ma ọ bụrụ na ọ dị, biko nye ya mkpịsị aka aka ma soro ndị enyi gị kerịta ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ụlọ ahịa GCN anyị nwere ụdị uwe a dị egwu Alpe d'Huez zuru ezu na anyị Dutch Corner, mma Ọbụna GCN musettes. Na ịhụ edemede ọzọ gbasara nri na Grand Tours na ihe ndị Pro Riders na-eri, pịa musette m.
Gini bu onu ahia nke Tour de France?
N'ezie, onye na-agba ịnyịnya nke ọ bụla na-ahazi nke yaigwe kwụ otu ebedabere na ọnọdụ na mmasị ya, mana ka anyị leba anya na ihe ndị mejupụtara ya na atụmatụ yan'imeụdị ndị na-azụ ahịa na-agbakwụnye onye ruru $ 11,500ọnụahịamkpado
Kedu ihe bụ nkezi mph maka Tour de France?
Kemgbe ọtụtụ afọ gara aga, onye mmeri nkenjegharịemeela ka mkpokọtankezi ọsọnke dị gburugburu 25mph (40kmph) mana nke ahụ gụnyere ihe niilenjegharị. Uphill, downhill, oge ikpe, flatland, ọ bụ ọkara niile na 25mph.16. 2015.
Kedu ka ndị na-agba ịnyịnya Tour de France si aga ọsọ ọsọ?
Ihe nzuzo karịrị mmadụ ọsọ naTour de Francebụ peloton, ìgwè ndịndị na-agba ịnyịnyan’egwuregwu igwe kwụ otu ebe. (Foto nke Eric Michelat si Pixabay.) Formdị njem njem kachasị dị mma bụ igwe. Otu igwe kwụ otu ebe na-eme ka mmadụ na-agagharị site na isi A ruo ebe B na-enweghị isi.
Carbs ga-enye gị etiti oge. Mana obere kalori ha pụtara na akpa uwe gị nwere ike ọ gaghị dabara ọtụtụ ihe ịchọrọ: Maka ibundị na-agba ígwè, ogologo ogologo nwere ike ịghọ aunerena-eri asọmpi, Seebohar na-ekwu. Ọ ga - agbakwunye calorie (nke ahụ bụ ihe dị mma: ihe oriri ọzọ!) Ma chịkwaa shuga shuga.27.04.2018
Kedu ihe ndị na-agba ịnyịnya Tour de France na-eri na igwe kwụ otu ebe?
Ndị na-agba ịnyịnyana-erikarị agwakọta nke ezigbo nri na gels iji kụọ ihe dịka 60-90g nke carbs kwa elekere. Nke a bụ ihe usoro siri ike nwere ike ịdị. Achịcha osikapa abụọ, croissants na jam na ham, Ogwe ike 6, gels isotonic 2, iko 2 nke coke, 6 bidons nke ihe ọ electroụ electroụ electrolyte. Iweghachite na-amalite oge aonye na-agba ịnyịnyana-apụ haigwe kwụ otu ebe.
Kedu ụgbọ ịnyịnya kachasị ewu ewu na Tour de France?
1. Astana / Wilier. Nke anyiịnyịnya ígwè kachasị amasịn’afọ aTour de Francebụ Astana mara mma Wilier Zero SLR.
Ọnye na-bụ onye isi nke Tour de France?
Na njem na ọtụtụ agbụrụ ndị ọzọ, onye isi agbụrụ (onye na-eyi uwe na-acha odo odo) bụ eze. Ọ bụrụ na ọ ga-aga, ọ nwere ike ịkpọ ezumike ụlọ ịsa ahụ mgbe ọ bụla ọ chọrọ, ka Stephen Hall, onye ọkachamara ọkachamara na onye na-agba ịnyịnya ígwè na onye mmeri na 2015 Tour of Thailand kwuru.
Enwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eto eto na Tour de France?
Otu ịnụ ọkụ n'obi a, ndị na-eto eto na-agba ịnyịnya ígwè - ụmụ akwụkwọ anọ na ndị isi anọ sitere na klọb si mpaghara ahụ gara - ka a na-akpọ ka ha gaa nke mbụ na nke 30 gara aga Eurovision Sport na Amaury Sport Organisation (ASO) nwere obi ụtọ ịkpọsa na ha agbatịkwuola nkwekọrịta ikike mgbasa ozi maka Tour de France ruo 2025.
Ego ole ka ndị nke mbụ na-agba ịnyịnya na-aga na Tour de France?
A ga-ekesa ha na njedebe nke ọkwa ọ bụla ma nye ha 10, 6 na 4 sekọnd na atọ ndị mbụ.